Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Dhuuso Geel mana urto mana oosho
Dhuuso Geel mana urto mana oosho
Nov 12, 2012 SOMALI NEWS 0
Jaaniska maanta reer Awdal tabashadooda ku meel-marin karaani waa musharaxiinta oo qaadaca doorashada golaha degaanka
Odayada dhaqanka ee reer Awdal Iyo siyaasiyiintoodaba waxa u fiican inay iska aamusaan hadii aanay hadalkooda ficil ku darayn. Bani’aadamku waa ishii qaate, wixii uu kaa arko uunbuu kugula dhaqmaa.
Tusaale ahaan, haddii labo wiil walaalo yihiin oo midkood qal-qaali gacanta ka hadla yahay midna uu miskiin xishood badan oo nabadda caabuda yahay waalidkooda qiimo gaar ah ayay ugu kala fadhiyaan labadaa wiil. Waa marka aan ka hadlayno bulsho soomaliyeed.
Soomalidu sideedaba waa bulsho xasaradbadan oo aan xeerka iyo xishoodka tixgalin, balse xoogga iyo xarragada tixgalisa. Sidaas awgeed Waalidku wuxu jecelyahay wiilka daan-daansiga badan, ka nabadda jecelna wuxu u yaqaan qeyrkii ka hadhe jilicsan oo aan dhaxan tirayn.
Wiilka xasaradda badan aabuhu wuxu ku aaminaa naftiisa iyo xoolihiisa, dalabaadkiisa wuu fuliyaa, wixii uu u baahdana wuu siiyaa, waayo wuxu u arkaa nin raga oo la mid ah oo labo-xiniinyood leh ah oo haddii uu cadhoodo wax yeeli kara. Laakiin kan gibil-madaadshaha ah laguma xisaabtamo. Waana dhaqan fool-xun oo illaa iyo maantadan oo la joogo qarnigii 21aad ka fuqi la’ qalbiga daciifka ah ee aragtida gaabani hageyso.
Marka soomaalidu kala tilmaamayso wiilka waxtarka leh iyo kan aan waxtarka lahayn waxay yiraahdaan ” Awr aan DOO la odhan iyo Wiil aan DAA la odhan midna faa’iido maleh” halkaa waxa inooga cad dhaqanka soomalidu inuu ku salaysan yahay fowdo.
Araartan dheer waxa iga keenay kadeedka haysta odayada iyo siyaasiyiinta Awdal. Waxan dareemayaa in dadka reer Awdal ku dhacu ka maqanyahay. Waana tii uu Ugaas Nuur ku arkay Gadabuursiga wakhtigii uu hogaaminayay, waana kii ka tegay murtidii caan-baxday ee ahayd ”Gadabuursi wuu kasaaye ma karo” waa midda illaa maanta ka muuqata, dhibta haysata way wada arkayaan laakiin ma karayaan inay ficil la yimaadaan.
Odayada reer Awdal iyo Siyasiyiintooda waxan ka codsanaynaa inayna dhalinyarada soo koraysa doqoniimada barin. Waa laga wanaagsanyhay hadalkiinu inuu noqdo Dhuuso geel mana urto mana oosho.
Tabasho siyaasi ah oo aad qabtaan inbadan baad ka hadasheen, Dilal la idiin geystay waad ka hadasheen, Dhul la idinka boobay waad ka hadasheen. Wixiinu hanjabaad wuu dhaafi waayay, mid kaliya oo aad ficil ku darteen lama hayo. Afar maalmoodbaad Boorama iyo Dila ka dhex doobisaan, hadallo waaweynbaad tidhaahdaan, kadibna cadhadiinu sidii xunbada ayay gudhaa, markaa sow wax la bartay ma tihiin.
Xildhibaanada guurtida iyo baarlamanka somaliland ku jira iyo Odayada dhaqanka midbaan odhan lahaa
Musharaxiinta golaha degaanka oo waliba dhalinyar u badan midbaan odhan lahaa
Xildhibaanada Awdal/salal ee golayaasha somaliland dhex fadhiya waxan odhan lahaa iskaga dareera hadday tabashadu dhab idinka tahay oo aad dadkiina u hiilinaysaan.
Musharaxiinta golaha degaanka u ordaya, waxan odhan lahaa qaadaca doorashada golaha degaanka haddii aad doonaysaan in tabashadiina siyaasiga ah wax laga qabto
Odayada Dhaqanka waxan odhan lahaa muujiya kaalintii odaynimo, Ka joojiya doorashada goboladiina oo dhalinyarta ku qanciya inay qaadacaan doorashada golaha degaanka, xildhibaanada Hargeysa joogana ku amra inay golayaasha ka dareeraan, wax-garadka beesha dhexe ee wixii lagu heshiiyay ka baxayna gogol u dhigta oo la gar-naqsada
Haddii kale oday iyo inanba isma dhaantaane afkiinna iska haysta, wax la bartaybaad noqoteene guryaha ka dhex ooya.
Ninka aanan u dhiidhiyin
Saw Dhurwaa’iyo maaha
Dhidarkii Ibnu Aadam
Waxba yaanan is dhowrin
Is dhaguugin dadkeenow
Doqon iyo dhabcaaliyo
Dhariyo yaynan u muuqan
Gobanimo waw dhalashee
Nin walbowba dhankaaga
Dhexda dhiisha ka yeel
Harowo news/Editorial Harowonews@gmail.com
DEG DEG Ah: Isku Aadka Koobka Bariga Iyo Bartamaha Africa Oo Caawa La Soo Saaray + Soomaaliya War-murtiyeed kasoo baxay gudiga golaha sare ee KMG Awdalstate